कुलमानको कार्यकाल सकियो, के के गरे त चार वर्षमा ? (भिडियोसहित) – Himalaya Television
२०७७ भदौ २८ गते २०:४९
२८ भदौ २०७७, काठमाडौं । २०७३ भदौ २९ मा नेपाल विद्युयत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बनेका कुलमान घिसिङको कार्यकाल आजबाट सकिएको छ । ४ वर्ष प्राधिकरणको प्रमूख बनेका घिसिङले यस अ‍वधिमा केके गरे त ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकालको सबैभन्दा सम्झनलायक काम भनेको देशलाई दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट मुक्त बनाउनु हो ।
लोडसेडिङ हट्दा अर्थतन्त्रलाई विस्तारको बाटोमा अघि बढेको त छ नै सामाजिकरुपमा समेत सकारात्कम प्रभाव पारेको छ । चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानु घिसिङको कार्यकालको अर्को सफलता हो । घिसिङ्गले नेतृत्व लिनुअघि ३४ अर्ब ६१ करोड संचित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ५ अर्ब संचित नाफामा छ ।
गएका चार वर्षमा विद्युत उत्पादन ४ सय ५७ मेगावटले बढेर १ हजार २ सय ५८ मेगावट पुगेको छ । यसले भारतबाट आयातित विद्युतको हिस्सा ३५ प्रतिशतबाट २२ प्रतिशतमा झारेको छ ।
विद्युत पहुँचामा पुग्ने जनसंख्या ६३ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिव्यत्ति विद्युत् खपत १ सय ३१ यूनिट रहेकामा बढेर २ सय ६९ यूनिट पुगेको छ । २५ दशमलव ७ प्रतिशत विद्युत चुहावट घटेर १५ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ । यो अवधिमा २ हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ ।
–प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानु
–विद्युत उत्पादन बढनु
–विद्युत पहुँच विस्तार
–विद्युत् खपत बढ्नु
–प्रसारण लाइन थपिनु
–ग्रीड सबस्टेसनको क्षमता बिस्तार
–ट्रान्सफर्मरको क्षमता बिस्तार
–१५ वटा जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण
–तार भूमिगत र स्मार्ट मिटरको जडान कार्यको सुरुवात
कुलमान चुकेका क्षेत्र
–२ करोड थान एलइडी बल्ब विवाद
–डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद
–निर्माणाधिन जलविद्युत र प्रसारण लाइनले गति नलिनु
–१४ जिल्लाका जलविद्युत नपुग्नु
–बिजुली गइरहने र लो भोल्टेजको समस्या
–पेट्रोलियम पदार्थको साटो विजुली प्राथमिक्तामा नपर्नु
–उत्पादित बिजुलीको बजारबारे अन्यौल
विभिन्न प्रसारण लाइनबाट करिव ३ सय ५० मेगावाट विद्युत आयात–निर्यात गर्ने क्षमता बढेर १ हजार ५ सय मेगावट पुगेको छ । ग्रीड सबस्टेसनका क्षमता २ हजार २ सय २३ मेगावाटबाट ४ हजार १ सय ६१ मेगावाटमा पुगेको छ ।
ट्रान्सफर्मरको क्षमता २ हजार ६ सय एमभीएबाट ३ हजार ५ सय एमभीए नाघेको छ । १५ वटा जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा तारलाई भूमिगत गर्ने तथा औद्योगिक ग्राहकलाई स्मार्ट थ्री फेज मिटर र घरायसी ग्राहकलाई स्मार्ट मिटर जडानको काम शुरु भएको छ ।
यी लगायतका अन्य थुप्रै राम्रा काम भएपनि घिसिङ्गको कार्यकाल विवादरहित भने हुन सकेन् । घिसिङकै पालामा प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा भारत सरकारबाट २ करोड थान एलइडी बल्ब किन्ने निर्णय विवादमा पर्यो ।
टेण्डर प्रक्रियाविनै भारतसँग महँगोमा बल्ब खरिद गर्न खोजिएको र यसमा अनियमितताको आरोप लागेपछि घिसिङले रुँदै गलत नभएको प्रस्टिकरण दिनुपर्यो । यद्यपि त्यसपछि बल्ब खरिद प्रकृयाबाट प्राधिकरण पछि हट्यो ।
यस्तै डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवाद घिसिङको कार्यकालमा गाँठो परेर बसिरह्यो । देशभर चर्को लोडसेडिङ हुँदा बखत प्राधिकरणले उद्योगीलाई साविकको भन्दा महँगो दरमा नियमित बिजुली दिएको थियो ।
तर लोडसेडिङ हटिसक्दा समेत प्राधिकरणले पुरानै दरमा उद्योगीलाई बिल काट्यो । यसले उद्योगी त्यस्तो शूल्क नतिर्ने र प्राधिकरण उठाएरै छाड्ने अडानमा छन् जसलाई सरकारले बनाएको छानबिन समितिले समेत सुल्झाउन सकेको छ‍ैन् ।
यस्तै निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनको काम सन्तोषजनक छैन् । निकै महत्वका साथ हेरिएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पटक(पटक म्याद थप्दा समेत सकिएको छैन् ।
रसुवागढी, मध्यभोटेकोशी र सान्जेन लगायतका जलविद्युत आयोजना तथा निर्माणाधिन विभिन्न प्रसारण लाइनको कामले गति लिएको छैन् । माथिल्लो अरुण, दूधकोसी लगायतका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन अध्ययनका काममा अपेक्षाकृत प्रगती गर्न भएको छैन् ।
अझै पनि १४ जिल्लाका बासिन्दासामु प्राधिकरणले विजुली पुर्याउन सकेको छैन् । विद्युत पुगेका धेरै ठाउँमा समेत बिजुली गइरहने र लो भोल्टेजको समस्या व्याप्त छ । स्वदेशमा विद्युत खपत बढाउने गरी रणनीति निर्माणमा समेत प्राधिकरण चुकेको छ ।
यसले अहिले पनि ग्राहकले पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा विजुली उपयोगलाई प्राथमिक्तामा राखेका छैनन् । यस्तै निर्माणाधिन आयोजनाबाट उत्पादन भएपछि स्वदेशमा बढि हुने विद्युतले बजार नपाउने जोखिम कायमै छ ।
यी विषयमा भने कुलमानले कमाल देखाउन सक्नुभएन् । यद्यपी लोडसेडिङ आक्रान्त अवस्थाबाट लोडसेटिङमुक्त बनाएका कुलमानको नाम अन्धकारमा बिलाएर जाने छैन् ।